တရုတ်ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills က, Angle ပခုံးမျက်နှာ Mills က 90 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က, BT40 က Round Dowel မျက်နှာစက်တင်ပို့သူများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မျက်နှာ Mills က
မျက်နှာ Mills က ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills က, angle ပခုံးမျက်နှာ Mills က ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, 90 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
CNC တွင်ခုံစက်စင်တာ INDEX carbide မျက်နှာစက်များ
KM 45 ဒီဂရီအမျိုးမျိုးရှုး milling မျက်နှာ
CNC တွင်ခုံစက် INDEX မျက်နှာ Mills Cutter
High Quality မျက်နှာစက် Cutter ဝင်ရိုးစွန်းဆှဲ
EMR 5R 4T CNC ပတ်ပတ်လည် Dowel မျက်နှာကြိတ်
PRMW INSERT EMR 6R က Round Dowel မျက်နှာ Mills က
EMR 5R CNC ပတ်ပတ်လည် Dowel မျက်နှာကြိတ်
high-quality KM45 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က
TAP400R 90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာ Mills က
shell ကိုကြိတ်ရှုး KM45 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က
EMR CNC ရှုးပြားလှည့်လည်နှာခေါင်းရှုးခေါင်းကို
RAP 75 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က
KM 45degree မျက်နှာ Mills က KM12 မျက်နှာ Mills က
90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာ Mills က
EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က
High Quality EMR-5R-63-22-4T က Round Dowel မျက်နှာ Mills က
High Quality EMR-5R-50-22-4T က Round Dowel မျက်နှာ Mills က
90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills က
High Quality EMR က Round EMR686R Dowel မျက်နှာ Mills က
High Quality EMR က Round EMR686R Dowel မျက်နှာ -Mills
CNC တွင်ခုံစက်စင်တာ INDEX carbide မျက်နှာစက်များ 1.Brand အမည်: Tool များသစ်ပင်များ 2.Model အရေအတွက်: KM12 50-22 3.Material: အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်း 4.Surface ကုသမှု: နီပန်းကန်...
KM 45 ဒီဂရီအမျိုးမျိုးရှုး milling မျက်နှာ ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! 1.Brand အမည်: Tool...
CNC တွင်ခုံစက် INDEX မျက်နှာ Mills Cutter 1.Brand အမည်: Tool များသစ်ပင်များ 2.Model အရေအတွက်: EMR / EMRW 5R50-22, 5R63-22, 6R63-22 ... 3.Material: အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်း 4.Surface ကုသမှု: နီပန်းကန် အခြေအနေ 5.Cutting: အပူပိုင်း, စိုစွတ် 6.Process အမျိုးအစား: ကြမ်းတမ်း, Semi-finish ကို, finish ကို 7.Application:...
High Quality မျက်နှာစက် Cutter ဝင်ရိုးစွန်းဆှဲ အထူးမျက်နှာကြိတ်ရှုး Milling Mohs234-FMB 22/27/32 R8 / MT / C20-FMB22 / 27 R8 မက်ထရစ်လက်မ, Mohs 2, 3, 20 Shanks ချင်းနှင့်အတူ4Shanks ရှုးအကြီးအကဲများ။ FMB22 50 နှင့် 63mm အချင်း cutterheads စုဝေးရန်အသုံးပြုသည် FMB27 80mm အချင်း cutterhead စုဝေးရန်အသုံးပြုသည် FMB32...
EMR 5R CNC ပတ်ပတ်လည် Dowel မျက်နှာကြိတ် ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး,...
high-quality KM45 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး,...
shell ကိုကြိတ်ရှုး KM45 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets...
EMR CNC ရှုးပြားလှည့်လည်နှာခေါင်းရှုးခေါင်းကို ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets...
RAP 75 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး,...
KM 45degree မျက်နှာ Mills က KM12 မျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့်...
90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ,...
High Quality EMR-5R-63-22-4T က Round Dowel မျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
High Quality EMR-5R-50-22-4T က Round Dowel မျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
High Quality Rap400R-63 75 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
High Quality EMR က Round EMR68 6R Dowel မျက်နှာ Mills က ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
တရုတ်နိုင်ငံ မျက်နှာ Mills က ပေးသွင်း
ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်:
1 ။ မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း
2 ။ ငါတို့သည်ကိုယ်စက်ရုံရှိစဉ်ကတည်းကအချိန်အတွက် Delivery guranteed နိုင်ပါတယ်,
3 ။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရ,
4 ။ မိတ်ဖက် Truested, ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 60 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့တန်းတူရေးနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အခြေခံ (အရောင်းအဘို့အအေဂျင်စီပါဝင်သည်) အားလုံးဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။
ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills က
5.Type: 5R က Round မျက်နှာ Mills က
angle ပခုံးမျက်နှာ Mills က
90 ဒီဂရီမျက်နှာ Mills က
BT40 က Round Dowel မျက်နှာစက်
90 လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills က